Myanmar Ghost Font for Android
Myanmar Ghost Font
About Myanmar Ghost Font
"Myanmar Ghost Font" Root မလိုထည့်သွင်း မြန်မာစာလုံးအလှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Ghost ဆိုတဲ့စာလုံးအလန်းလေးတစ်ခုပါ။
ပြီးရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်" ကိုနှိပ်ပြီး Myanmar Ghost(myFont) ကိုရွေးပေးပါ။
Myanmar Ghost Font ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်ပေးရုံပါပဲ :D
မရရင် "ဖောင့်ပြောင်းမည်(၂)" ကိုနှိပ်ပြီး Font တွေထဲမှာ Myanmar Ghost Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။
Ghost.itz သို့မဟုတ် Ghost.txj ကိုဖွင့်ပြီး Apply လုပ်ပေးပါ။
Theme တွေထဲမှာ Myanmar Ghost Font ဆိုတဲ့ Theme ကိုရွေးပြီး Apply ပေးလိုက်ပါ။
Myanmar Ghost Font ဆိုတဲ့ Font ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊။
Download and install Myanmar Ghost Font version 1.0 on your Android device!
Android package: com.myanmar.ghostfont, download Myanmar Ghost Font.apk
Oh snap! No comments are available for Myanmar Ghost Font at the moment. Be the first to leave one!
Myanmar Tabaung Font — Myanmar Font StylesFree App